FIROTSAHAN’NY ORANA :: Dibo-drano ny lalana ao an- tanànan’i Toliara • AoRaha
FIROTSAHAN’NY ORANA Dibo-drano ny lalana ao an- tanànan’i Toliara
Tondra-drano noho ny rotsak’orana be loatra ny tanànan’i Toliara, omaly. Araka ny fanazavana avy amin’ny Kaompanian’ny Zandarimaria any an-toerana, dia noho ny oram-be nikija, ny alahady alina no nahatonga izany.
“ Tany amin’ny faritra iva no tena tondraka. Tafiditra tany an-tokantrano ny rano na dia tsy nahenika firy ny tanànan’i Toliara rehetra”. Mila mitandrina, araka izany, ireo olona mipetraka amin’ ny faritra iva iny satria mbola hitohy ny rotsak’orana any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara. Mbola mitoetra ihany koa ny fampitandremana miloko mavo amin’iny faritra iny, araka ny fanazavana azo avy ao amin’ny Sampana mpamantatra ny toetr’andro.
Ho an’ny anio, mbola hitohy ny rotsak’orana ho an’ny faritra maromaro manerana ny Nosy. Hanorana tandrifin-drahona ny any amin’ny Faritra Menabe, Matsiatra Ambony, Ihorombe ary Atsimo Atsinanana. Hanorana tandrifin-drahona mety harahan- kotroka ny any Melaky, Bongolava, Atsinanana ary Vatovavy Fitovinany. Hisy orana tandrifin-drahona kosa ny amin’ny Faritra Itasy, Analamanga, Vakinankaratra ary ny any Nosy Be sy Sambirano.
Raha ny vinavinan’ny Sampana mpamantatra ny toetr’andro ihany dia efa misy fiakarany ny mari-pana. Any amin’ny Faritra Vakinankaratra no misy ny mari-pana ambany indrindra, izay 9 °C ary any Mahajanga kosa ny ambony indrindra izay mahatratra 36°C .
Tontolo iainana simba – Ankadiefajoro Mampitaraina ny mponina ny fandorana fako
Tan-tsoroka ny faritra atsimo Tokantrano efatra arivo sy iray alina nisitraka ny tetikasa Fagnoitse
FIFANDRAISANA SY FIFAMPIZARANA :: Hiresaka amin’ny mpino amin’ny sarimihetsika ny Papa François
Baolina kitra – “CAN 2019” Nampodian’i Tonizia am-boninahitra ny Barean’i Madagasikara
Fodimandry Nampihetsi-po ny fanaovam-beloma farany an’i Jaona Elite
Baolina kitra – CAN 2019 Hifandona amina ekipa tsy mbola nandresy mazava ny Barea